Anya Pụrụ Iche na Nlekọta Afọ Studio | Martech Zone
Nlele Anya Nanị na Rundown Content Studio
Thursday, January 7, 2016 Thursday, January 7, 2016 Douglas Karr
Taa anyị nwere Martech Zone nanị - anya nke mbụ n'ime Rundown Afọ Studio!
Rundown bụ nchịkọta dị mfe, dị mfe iji ngwa egwu ị nwere ike iji wuo Studio Studio nke ahaziri maka ndị otu ọdịnaya gị na otu ụzọ ndị otu gị si arụkọ ọrụ ọnụ.
Nke mbu, odi nkpa iburu n'uche na enwere ike iji Rundown Apps mee ihe dika ngwa ndi ozo - yabụ oburu na ichoro kalenda ọdịnaya, enwere ngwa maka ya. Naanị mkpa ịnagide nnabata? Enwere ngwa maka nke ahụ. Naanị ịchọrọ ka ngwa iji dee ma kesaa atụmatụ gị? Enwere ngwa ngwa maka nke ahụ!
Ngwa Rundown dị mfe, azịza elebara anya maka nsogbu ndị akọwapụtara na ọdịnaya ọdịnaya, ma haziri ka ha dịrị mfe iji ma bụrụ ọnụ - a na-akwụ onye ọ bụla ọnụ na $ 20 kwa ọnwa! Mana ka ị na-ejikọ ha ọnụ, ọ ka mma ka ha na-arụ ọrụ.
N'adịghị ka ọtụtụ nchịkọta ihe izugbe izugbe na-emegharị maka mmepụta ọdịnaya, a na-ahazi ngwa ngwa Rundown site na ncha iji rụọ ọrụ ọnụ - yabụ kama ichegbu onwe gị banyere ma enwere njikọta ma ọ bụ na ọ nweghị, ma ọ bụ otu otu n'ime ihe ngwọta gị ga-esi rụọ ọrụ na ihe ndi ozo eji emeputa ihe omuma gi, Ngwa Rundown nwere ike gbanye ma gbanye ya site na iji otu ịpị.
N'agbanyeghị otu nnukwu ọdịnaya ọdịnaya gị si dị ukwuu ma ọ bụ pere mpe, ịnwere ike ịhazi ngwa ịchọrọ iji wuo Studio Studio zuru oke maka otu gị. Otu n'ime ihe ndị dị jụụ banyere iji ọtụtụ ngwa egwu ọnụ bụ na ka ị na-eji, "amamịghe" Rundown na-enweta.
N'azụ ọ bụla Rundown App bụ ụlọ nke algọridim na ọrụ ha kpọrọ "MUSE" - Ngwunye Mgbasa Ozi na Ntinye Aka. MUSE na-arụ ọrụ n'azụ igwe iji rụọ ọrụ gị dị ugbu a ma tụọ aro ga - enyere gị aka ịmịpụta ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma.
MUSE na-akpalite Kalinda Ọdịnaya gị na-akpaghị aka, ọ na-agwa gị mgbe ihe ga-abịaghị n'oge TUPU oge ọ bịarutere n'ezie, ọ na-atụ aro onye ị ga-ekenye ihe na ihe ndị ọzọ. Ihu ọma, ọ na-eme ọtụtụ ihe siri ike, na-agwụ ike maka gị, yabụ ị nwere ike ilekwasị anya na ịme ọdịnaya dị ukwuu.
Na mkpokọta, ọ dị ka nnukwu azịza maka ụlọ ọrụ, ụdị ndị na-ewepụta ọtụtụ ọdịnaya, yana ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ. Y’oburu n’inwe ihe kariri mmadu ise ma obu iri n’ime aka ha na emeputa ihe, Rundown bu ezigbo ihe kariri ihe omuma na Google docs na kalenda i gha aru oru taa.
Banye maka Rundown ngwa ọdịnala Free!
Ndị a bụ ụfọdụ nseta ihuenyo naanị site na ụfọdụ Ngwa:
Dashboard nke Onwe Onye
Cepttụle na imekọ ihe ọnụ
Omnichannel Ọdịnaya Editor
Tags: ọdịnaya ụlọ ọrụgbatuoTaulbee Jackson
Ndị ahịa ahịa ahịa ahịa agbanweela kpamkpam
Ego ole ka ndị ọchụnta ego na-etinye ego na atụmatụ azụmaahịa ọdịnaya?
Jenụwarị 9, 2016 na 4:17 PM
daalụ maka post